UXiaomi ubhengeza ukuba zeziphi iifowuni ezinokufikelela kwi-Android Q | I-Androidsis
Iifowuni zeXiaomi eziza kuhlaziya kwi-Android Q
Ngenyanga i-Android Q kufuneka ibe semthethweni. Kwezi nyanga sinee-betas ezininzi, apho ezinye zeendaba eziza kufikelela kwinkqubo yokusebenza kule nguqulo intsha ziye zaziwa. Ukongeza, kwezi veki iimveliso ziqala ukuqinisekisa ukuba zeziphi iifowuni ezinokufikelela kolu hlaziyo, njenge imbeko o Huawei. Kwezi brand sinokongeza iXiaomi.
Uphawu lwesiTshayina luqinisekisa lIifowuni eziza kuhlaziya kwi-Android Q. Ezinye zezi fowuni ziya kuba nakho ukufikelela kulo nyaka, njengoko kuqinisekisiwe nguXiaomi. Ngelixa ezinye iimodeli ziya kufuneka zilinde ithutyana, kwaye ziya kuba nakho ukufikelela kolu hlaziyo kwangoko kwi-2020.
Uphawu lwaseTshayina lwalusele lutyhile iimodeli banokuba ne-beta, ezingaphezulu okanye ezingaphantsi kweefowuni ezifanayo kule meko sele sinazo iimodeli zokugqibela eziphezulu ikakhulu. Njengesiqhelo kula matyala, ihlala isiphelo esiphezulu sophawu esinokufikelela kuhlaziyo kwindawo yokuqala, imeko ephindaphindwayo nge-Android Q. Nangona sineemodeli eziphakathi, eziphakathi kwazo Kuya kufuneka ulinde ngaphezulu kancinci ukuze ube nokufikelela kuyo.
1 Iifowuni zeXiaomi ezine-Android Q kwi-2019
2 Iifowuni eziza kuhlaziya kwi-Android Q ngo-2020
Iifowuni zeXiaomi ezine-Android Q kwi-2019
Ngelo xesha Akukho mihla inikiweyo yokwaziswa kwayo. Inkampani iqinisekisile kuphela ukuba izakuba semva konyaka, kolu luhlu lweefowuni. Ngokunokwenzeka ukusukela ngoNovemba okanye ngoDisemba uninzi lwabo luyafikelela kuyo. Nangona kuya kufuneka silinde de kubekho iindaba eziphathekayo ezivela kumvelisi malunga noku. Uluhlu olukule meko yile:
I-Redmi K20 Pro (Xiaomi Mi 9T Pro)
I-Redmi K20 (Xiaomi Mi 9T)
Xiaomi Mi 8 Ushicilelo lweFingerprint
Ezi ziimodeli zokuqala eziza kuba nokufikelela kwi-Android Q njengoko besitsho kwinkampani. Asazi ukuba luluhlu oluchaziweyo ngale ndlela, kuba umzekelo kwimeko yeMi Mix 3 kulindeleke ukuba imodeli ene-5G nayo iyifumane ngaphambi kokuphela konyaka. Yintoni egqithisile, asinakulibala malunga neMi A3, ifowuni ene-Android One, kuba ezi modeli zihlala zinokufikelela kuhlaziyo ekupheleni konyaka, ukuze le meko iphindaphinde kwakhona. Kodwa nangayiphi na imeko kufuneka silinde iindaba ezivela kuhlobo, kwaye siza kubona ukuba ngaba olu luhlu lweemodeli eziza kuhlaziywa kwi-2019 ekugqibeleni lubanzi. Ayingemangalisi ukuba oku kugqityiwe ukwenzeka.
Iifowuni eziza kuhlaziya kwi-Android Q ngo-2020
Kwelinye icala, sele sinezinye iifowuni ezimbini eziqinisekisiweyo kuya kufuneka zilinde ithutyana. Kwimeko yakho, Uhlaziyo kwi-Android Q luya kukhutshwa kwiinyanga zokuqala ze-2020. Eyona nto ixhaphakileyo kwezi meko kukuba kwikota yokuqala yonyaka, kodwa uXiaomi akafunanga okanye wakwazi ukunika imihla ethile ukuza kuthi ga ngoku. Bathetha ngekota yokuqala, kodwa ngaphandle kokunika idatha ethile. Okwangoku zimbini kuphela iimodeli, ke ezinye iifowuni kuya kufuneka zilinde ixesha elide:
Redmi Qaphela 7
I-Redmi Qaphela i-7 Pro
Iimodeli ezimbini eziphakathi, Zeziphi iimodeli ezithandwayo zeemveliso ezimbini ukuza kuthi ga ngoku. Ezinye iifowuni ezithengisa kakuhle kwaye kwiinyanga zokuqala ze-2020 ziya kuba nakho ukufikelela kwi-Android Q njengoko iqinisekisiwe ngoku nguXiaomi uqobo. Uluhlu lweefowuni ngokuqinisekileyo luya kubanzi ngakumbi, kodwa ubuncinci zezi ziifowuni zokuqala eziqinisekisiweyo. Ke ukuba unayo, sele uyazi ukuba uya kuba nakho ukufikelela kuyo. Uhlaziyo oluthembisa ukuza notshintsho oluninzi kwaye sijonge phambili kulo, nangona nangoku singenawo umhla wokukhutshwa kwaye kubonakala ngathi kukho amathandabuzo amaninzi ngegama lakhe elinokwenzeka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Iifowuni zeXiaomi eziza kuhlaziya kwi-Android Q
Ilizwe lam, iMexico, uza kufika nini uhlaziyo kwi-Android 10, ifowuni yam iyiXiaomi mi 9
Uyicela njani iFaceApp ukuba icime idatha yakho kwiserver yayo
UPokémon Duel uthi ndlela ntle kwintengiso